Madaxweynaha J. F. S. oo kulamo la qaatay waxgaradka iyo bulshada degmada Diinsoor – Radio Muqdisho
Madaxweynaha J. F. S. oo kulamo la qaatay waxgaradka iyo bulshada degmada Diinsoor
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Feeraalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray magaalada Diinsoor ee gobolka Baay, ayaa kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida, kuwa AMISOM. waxgaradka iyo bulshada ku nool degmadaasi.
Madaxweynaha ayaa markii uu gaaray degmada Diinsoor waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Diinsoor, waxaana sidoo kale madaxweynaha halkaasi si diirran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiinta maamulka Koofur galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulkaasi mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka, waxgaradka kala duwan iyo qeybaha bulshada ku nool degmadaasi Diinsoor, wuxuuna ballan qaaday in dowladda Federeelka ay gacan ka geeysaneyso dib usoo nooleeynta adeegyadii bulshada ee degmada Diinsoor.
Sidoo kale madaxweynaha waxaa uu kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM ee fariisimaha ku leh degmadaasi, wuxuuna ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan sidii cadowga Shabaab looga xoreyn lahaa dhamaan dalkeenna oo dhan.
Madaxweynaha ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM ayaa dhawaan degmada Diinsoor ka xoreeyay maleeshiyaadka Shabaab oo muddo Siddeed sano ah dhibaatooyin joogta ah ku hayay shacabka ku nool degmadaasi, waana degmadii ugu dambeeysay ee ka tirsan gobolka Baay oo laga xoreeyo Shabaab.
Dhismaha waddo isku xirta Eyl iyo Dongorayo oo laga hadlay “SAWIRRO”